Walloo Kibbaatti pirojektiin bishaan dhugaatii ijaarame eebbifame
Makaanasalaam: Naannoo Amaaraa Godina Walloo Kibbaatti Pirojektoota baasii qarshii mil. 185 ta’aniin ijaaramaa jiran keessaa, pirojektiin bishaan dhugaatii birrii mil. 15niin ijaarame xumuramuun kaleessa eebbifameera.
Gaggeessaan hojii pirojektichaa Obbo Adaanee Nugusee sagantaa eebba pirojektichaarratti haasaa taasisaniin akka jedhanitti, dhaabbatni ‘menschen for menschens’ ykn namootni namootaaf jedhamu biyyattii keessatti tajaajila addaddaa kennuun rakkoolee hawaas-dinagdee furaa turuusaa himanii, pirojektiin bishaan dhugaatii Walloo Kibbaatti eebbifame kunis qaamuma hojii misooma dhaabbatichaa ta’uu dubbataniiru.
Pirojektiin Godina Walloo Kibbaa Aanaa Wagiddii naannawaa Lamii Roobititti eebbifame kun waggootan 30n dhufaniif kan tajaajilu yoo ta’u, hawaasni naannawichaa kuma 6 ol ta’aniif tajaajila ni kenna jedhameeti eegama.
Dhaabbatni namootni namootaaf jedhamu kun godinichatti aanaalee lama(Wagiddiifi Booranaa) keessatti qarshii mil. 185 ta’u ramaduun hojiilee kanneen akka eegumsa naannawaa, fayyaafi damee barnootaa, akkasumas fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuurratti hojjetaa kan jiru yoo ta’u, kanaanis rakkooleen hawaas-dinagdee furamaa jiraachuu ibsaniiru.
Maallaqni ramadame kunis pirojektii bishaan dhugaatii cinatti suphaafi ijaarsa daandii baadiyyaaf ooluun hojjetamaa jiraachuu hubatameera. Kana waliinis lafa jallisii hektaara 75 qopheessuun kuduraafi fuduraalee oomishuuf xumurarra gahee jira.
Torban kana/This_Week 12422
Guyyaa mara/All_Days 1821842